Debian 11 inouya neLinux 5.10, package updates, kugadzirisa uye zvimwe | Kubva kuLinux
Mushure memakore maviri ekuvandudza, yakavhurwa mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani ye Debian 11.0 Bullseye, vhezheni iyo inouya neyakawandisa shanduko huru uye izvo zvakare zvine 59551 binary mapakeji mune repository (42821 sosi mapakeji), ayo angangoita 1848 kupfuura izvo zvakapihwa muDebian 10.
Zvichienzaniswa neDebian 10, 11294 mabhinari matsva akawedzerwa, 9519 (16%) apera kana kusiiwa mapakeji akabviswa, 42821 akagadziridzwa mapakeji (72%). Hurefu hwese hwemafaira ese anopiwa mukugovera ndiwo mitsara yekodhi gumi nemashanu, 1.152.960.944, 6208 Vagadziri veXNUMX vakapinda mukugadzirira kwekutanga.
1 Debian 11 Main Zvitsva Zvimiro
2 Dhawunirodha uye tora Debian 11
Debian 11 Main Zvitsva Zvimiro
Mune iyi vhezheni nyowani inoratidzwa, tinogona kuona kuti iyo kernel ye Linux 5.10pamwe nenzvimbo dzedesktop GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24, Xfce 4.16 uye maturusi ekuvandudza GCC 10.2, LLVM / Clang 11.0.1, OpenJDK 11, Perl 5.32, PHP 7.4, Python 3.9.1, Rust 1.48, Glibc 2.31.
Padivi rezvikumbiro zvinopihwa muDebian 11, tinogona kuwana FreeOffice 7.0, Calligra 3.2, GIMP 2.10.22, Inkscape 1.0.2, Vim 8.2, Apache httpd 2.4.48, BIND 9.16, Dovecot 2.3.13, Exim 4.94, Postfix 3.5, MariaDB 10.5, nginx 1.18, PostgreSQL 13, Samba 4.13, OpenSSH 8.4.
Iyo graphical installer inopa kuvaka ne libinput pachinzvimbo chevdev mutyairi, icho chinovandudza touchpad rutsigiro, pamwe nesimboti inobvumidzwa muzita rezita rakatsanangurwa panguva yekumisikidzwa kwenyaya yekutanga uye kumisikidzwa kwemapakeji kwakapihwa kutsigira mashandiro ehurongwa, kana kuvhurwa kukaonekwa munzvimbo dziri pasi pesimba rako. Musoro mutsva weKushaworld unoshandiswa.
Iyo inosimudza inopa kugona kuisa iyo GNOME Flashback desktop, iyo inoenderera mberi nekuvandudzwa kweiyo yakasarudzika GNOME podhi kodhi, iyo Metacity hwindo maneja, uye maapplet akambowanikwa sechikamu cheGNOME 3 imwe nzira.
Nezve izvo zvigadziriso zvinounzwa muDebian 11, tinogona kuzviwana izvo UPS uye SANE zvinopa kugona kupurinda uye kuongorora pasina kutanga kuisa madhiraivha pane maprinta uye ma scanner akabatana neiyo system kuburikidza ne USB port. Driverless mode inotsigira IPP Kwese kupi maprotocol maprinta nema scanner: eSCL uye WSD protocols (sane-escl uye sane-airscan backend anoshandiswa).
Rairo nyowani "rakavhurika" rawedzerwa kuvhura faira mune yakasarudzika chirongwa cheiyo yakatarwa faira mhando. Nokusingaperi, iwo murairo unosanganisirwa neiyo xdg-yakavhurika utility, asi inogona zvakare kusungirirwa kune inomhanya-mailcap inobata, iyo inoteerera kusungwa kweyekuvandudza dzimwe nzira diki sisitimu painotanga.
Systemd inoshandisa imwechete, yakabatana boka revakuru (cgroup v2) nekutadza. Musiyano wakakosha pakati pemakgroups v2 uye v1 kushandiswa kwesimba rakajairika remakgroup emarudzi ese ezve zviwanikwa, pane kupatsanura madanho ekugoverwa kweCPU zviwanikwa, ndangariro kupwanya, uye I / O.
Zvakare, iyo kernel ine mutyairi mutsva weexFAT fileystem inogoneswa nekutadza, iyo isingachade kuiswa kweiyo exfat-fuse package. Iyo pasuru inosanganisirawo exfatprogs package ine new set yezvishandiso yekugadzira uye kuongorora exFAT FS (iyo yekare exfat-utils set zvakare inoramba iripo kuti iiswe yekumisikidza, asi mashandisiro ayo haakurudzirwe).
Iyo yekupedzisira password hashing algorithm ndeye yescrypt panzvimbo yeSHA-512.
Wakawedzera kugona kushandisa maturusi ekugadzirisa midziyo yePodman's sandbox, kusanganisira sekutsiva pachena kweDocker.
Inosanganisira vatyairi vePanfrost neLima, iyo inopa rutsigiro rweMali GPUs inoshandiswa muARM yekuvakisa yakavakirwa mamaboards.
Iyo Intel-media-va-driver inoshandiswa kushandisa Hardware vhidhiyo yekumhanyisa ekuwedzera maturusi anopiwa neIntel GPUs zvinoenderana neBroadwell microarchitecture uye nyowani.
Grub2 inowedzera rutsigiro rweiyo SBAT (UEFI Yakachengeteka Boot Yakananga Targeting) mashandiro, ayo anogadzirisa nyaya nekutorerwa kwetifiketi kweEFI Yakachengeteka Boot.
Iyo win32-loader application, iyo inokutendera iwe kuti uise Debian kubva paWindows pasina kugadzira yakasarudzika yekuisa midhiya, inowedzera rutsigiro rweEFI uye Yakachengeteka Boot.
Iyo graphical installer inoshandiswa pakuvakwa kweARM64.
Xfce imwechete CD imaging yamiswa uye 2 & 3 DVD ISO imaging yakamiswa yeamd64 / i386 masisitimu.
Dhawunirodha uye tora Debian 11
Kune avo vanofarira kugona kuyedza iyi vhezheni itsva yeDebian 11, vanofanirwa kuziva kuti inowanikwa mapfumbamwe ezvivakwa nerutsigiro rwepamutemo uye zviripo zvekuisa mifananidzo (ine GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon uye MATE ) inogona kurodha pasi muHTTP, jigdo kana BitTorrent.
Izvi unogona kuita kubva chinotevera chinongedzo.
Dzidzo yeDebian 11 ichaburitswa kwemakore mashanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Debian 11 inouya neLinux 5.10, zvigadziriso zvepakeji, kugadzirisa uye nezvimwe